Iindaba -Amayeza oNyango lwaseHwatime aye kwi-2019 Middle East eDubai Umboniso wezeMpilo kwiArab
I-Middle East Dubai Medical Expo, Impilo yaseArabhu yaqala e-Dubai World Trade Centre NgoJanuwari 28, 2019. Iinkampani ezingama-5000 kunye noochwephesha abangaphezulu kwe-140,000 kumzi-mveliso wezonyango phantse kumazwe ali-150 kwihlabathi liphela abathathe inxaxheba kumboniso weentsuku ezi-4. Umboniso ubonise itekhnoloji yonyango yakutshanje kunye neemveliso zeteknoloji ezijonge phambili. I-China yeyona pavilion inkulu yesizwe, kwaye bekukho ngaphezulu kwe-500 yababonisi base China benendawo yomboniso ye-100,000 yeemitha zesikwere. Inombolo yomnquba kaHwatime Medical nguH8F50.
I-Dubai Medical Expo Arab Health ngumboniso wamazwe ngamazwe oochwephesha kwezobugcisa kunye nesona sikhulu somboniso, olona luhlu lugqityiweyo lweemveliso zomboniso kunye nezona ziphumo zibalaseleyo kuMbindi Mpuma.
Ukusukela oko yaqala ukubanjwa ngo-1975, isikali somboniso, inani lababonisi kunye neendwendwe landile unyaka nonyaka. Ihlala inandipha udumo oluphezulu phakathi kwezibhedlele kunye nezixhobo zonyango kumazwe aseArab akuMbindi Mpuma.
Kulo mboniso, i-Hwatime Medical's booth ibonise i-I kunye ne-XM zothotho lweemonitha ezintsha, ii-HT, iHT uthotho lweemodyuli, ii-H zesigulana esinezigulana kunye no-T uthotho lweemonitha, ezitsala iindwendwe ezininzi zobungcali ukubuza yonke imihla. Ibonisa ngokupheleleyo umtsalane ongenasiphelo wetekhnoloji entsha.
Ngexesha lomboniso, hayi kuphela abathengi be-Hwatime Medical's Middle East abatyelele umnquba, kodwa kunye nenani elikhulu labathengi abavela kumazwe ahlukeneyo nakwimimandla kwihlabathi liphela batyelele umnquba kwaye bathethathethana ngemicimbi yokusebenzisana omnye komnye.
I-Hwatime Medical itsale inani elikhulu labathengi abanokubambisana kunye nokukhuthaza ukwandiswa kweemarike zase China kwezonyango ukufikelela kwinqanaba elitsha.
Ukubanjwa ngempumelelo kweDubai Medical Exhibition yeArabhu yezeMpilo akusivumeli nje kuphela ukuba sibone amandla okuya phambili kwishishini lezempilo laseTshayina ligqabhuka kwihlabathi liphela, kodwa iHwatime Medical ikulungele ukuhamba kunye nokuzithemba ngakumbi kwishishini lezixhobo zonyango jikelele.
Ixesha Post: Jan-30-2019